Vertical Francis Turbine yeChiteshi cheHydropower Yepakati uye Yakakura, China Vertical Francis Turbine yeVagadziri veHydropower Station yepakati uye yakakura, Vatengesi, Fekitari - HNAC Technology Co., Ltd.
Imba>Products Supplier>Yakazara Seti yeMechanical uye Magetsi Equipments>Hydraulic Turbine
Iyo hydraulic turbine muchina wemagetsi unoshandura simba rekuyerera kwemvura kuita rinotenderera remagetsi simba. MaFrancis turbines anogona kushanda kumusoro wemvura kureba kwemamita 20-700. Simba rekubuda rinobva kune akati wandei kilowatts kusvika 800 MW. Iyo ine yakakura kwazvo application renji, yakatsiga kushanda uye yakanyanya kunaka.
Francis turbines akakamurwa kuita marudzi maviri: iyo yakamira Francis uye yakachinjika Francis.
Iwo Vertical Francis turbines ane hunyanzvi hwepamusoro pane akachinjika turbines, ane kugadzikana kwekushanda kuri nani. Kune maturbines akakura, kuzunguzika kunokanganisa kugadzikana kwekushanda, nepo ma turbines akamira aine kugadzikana kuri nani.
HNAC inopa akamira Francis turbines anosvika zana nemakumi mashanu MW payuniti imwe, iyo inowanzo shandiswa mukati uye yakakura-yakasanganiswa yekuyerera turbines.
Dhizaini yakasarudzika patekinoroji-ye-iyo-inopa hunyanzvi hwepamusoro, hurefu hwehupenyu uye inochengetedza pundutso inoshamisa.